Iibso Istiikarada Ku -meelgaarka ah ee Biyo -La'aanta ah ee Dumarka - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Nambal Model: X56212
Nooca: Tattoo Ku-meelgaar ah
Cabbirka: 21X11.4cm / 8.26 "X4.48"
Wuxuu u adeegsan karaa maqaarka, dhoobada birta, dusha muraayadda.
Naqshado la naqshadeeyay oo la daabacay, midab dhalaalaya oo u eg tattoo dhab ah.
Xulasho aad u wanaagsan sida tattoo ku meel gaar ah, qurxinta jirka, sidoo kale waxay dabooli kartaa nabarrada jirka.
Dhib fudud iyo nadiif nadiif ah.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 62
ассные тату-наклейки ... после использования дополню отзыв ...
Aad ugu qanacsanahay
Fiiri xijaab Si degdeg ah u dhoofinta. Waxaan sameyn doonaa berri, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan jiri doonin wax dhibaato ah)
Wali ma aanan ordi, laakiin waxaan ku imid waqtigii loogu talagalay